နှစ်သစ် ၂၀၁၄ မှာ မင်္ဂလာပါ Happy New Year 2014! – ၂ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » နှစ်သစ် ၂၀၁၄ မှာ မင်္ဂလာပါ Happy New Year 2014! – ၂	8
Posted by Kyaemon on Jan 21, 2014 in Arts & Humanities, Education, Entertainment, Photography, Style & Beauty, Travel | 8 comments
ရွာသူရွာသားများ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနိုင်ဘို့ ဆက်လက်ပြီး တင်ဆက်လိုက်တာပါ။ ================
ရန်ကုန်က၂၀၁၄ နှစ်သစ်ကူးပွဲ မှာ ပရိသတ်ထဲကို ကြဲချလာတဲ့ စက္ကူပန်းရောင်စုံကြယ်ကလေးတွေ
Happy New Year 2014 – In Focus – The Atlantic
အာရေဗျ ဒူဘိုင်နိုင်ငံက ပါ
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပါရစ်မြို့တော် Eiffel Tower ကပါ
ဩစတေလျ ဆစ်နီမြို့ Opera House ကဇတ်ရုံက ပါ
ဟောင်ကောင်မြို့ ဗီတိုရီယားဆိပ်ကမ်းက ကုန်စည် ပြပွဲခန်းမဆောင်အပေါ်ကို လွှတ်လိုက်တဲ့ မီးပန်းအလှ
မြောက်ကိုရီးယားJuche မျှော်စင်နဲ့Taedong မြစ် နားကရှုခင်း
Happy New Year! Google Doodle, fireworks welcome 2014 – latimes.com
ဘေဂျင်း မြို့နား Badaling အရပ်က မဟာတံတိုင်မှာ လေဆာနဲ့ မီးမောင်းရောင်စုံထိုး
Greece ဂါရစ်နိုင်ငံAthens အေသင်မြို့Acropolis တောင်နားParthenon ကျောင်းပေါ်က မီးပန်းအလှ ====
ပါရစ်မြို့ Arc de Triompe အောင်ပွဲခံ မုက်ခေါင်းနား Champs Elysees လမ်း မ က ရှုခင်း
လန်ဒန် Big Ben နာရီ နား က မီးပန်းလွှတ်
ဘာရာဇီးနိုင်ငံ၊ Rio de Janeiro မြို့ Copacabana ကမ်းခြေနား မီးပန်းအလှ ======
နယူးရောက်မြို့ကရောင်စုံ စက္ကူ စ Confetti ရွာချပြီး နောက် အလည်လာသူ
Philadelphia မြို့ကDiana Vy က ဓာတ်ပုံ ရိုက်ဘို့ဟန်ပြင်
San Francisco မြို့နဲ့ Oakland မြို့ အကြား က တံတားအပေါ်ကိုမီးပန်းလွှတ်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပန်ဂျာပီတို့အမြတ်နိုးဆုံး Golden Temple ရွှေကျောင်းနားမှာ
ပါကစ်စတန် ခရစ်ယန် ကလေးမ ကဝတ်ပြု
Italy လူငယ်တဦး က ၅၉ ပေ (၅ထပ်လောက်) အမြင့်ကနေ
မြစ်ထဲကို ဒိုင်ဗင်ထိုးပြီး နှစ်သစ်ကိုကြို
ဘေဂျင်းမြို့သူက အမွှေးတိုင်တွေမီးထွန်းပြီး နှစ်သစ်ကိုကြို ==============
ချမ်းစိမ့်စိမ့် မြစ်ရေထဲ ရေချိုးပြီး နှစ်သစ်ကိုကြို
ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီး မှာမီးပန်းလွှတ်
Uruguay နိုင်ငံ Montevideo မြို့ မှာ နှစ်သစ်သင်္ကြန်လို စက်ဘီးသမားကို ရေလောင်းချ
တောင်ကိုရီးယား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တို့က ဘုံကျောင်းကိုသွားပြီး မီးအိမ်တွေအမွှေးတိုင်တွေနဲ့ပူဇော် ———
Hello, 2014 – Xinhua | English.news.cnbur
တရုပ်ပြည် မဟာတံတိုင်ကြီးမှာ ရောင်စုံမီးမောင်းထိုး အိုးစည်ဂုံမောင်းတီး တံခွန်ကုက္ကားတွေထောင်ကာ ကချေသယ်တွေနဲ့နှစ်သစ်ကိုတခမ်းတနားနဲ့ကြို L A Times က အခမ်းနားဆုံးလို့ရေးထား ————-
အောက်၂ ပုံ ကAustralia Melbourne မြို့နား Yarra မြစ် ပေါ်ကမီးပန်းအလှရှုခင်း
Ukraine နိုင်ငံ Kiev မြို့ ကပါ
Happy New Year, world – Photos – The Big Picture – Boston.com
အောက်၂ ပုံ က Russia, Moscow ကပါ
Australia နိုင်ငံ Sydney မြို့ ကပါ ———-
အောက်၂ ပုံ က ရန်ကုန် မြို့ ကပါ မလေးရှား Kuala Lumpur မြို့ကပါ —————
ဘာရာဇီးနိုင်ငံ၊ Rio de Janeiro မြို့ Copacabana ကမ်းခြေနား မီးပန်းအလှ
Happy New Year! How the world celebrated the start of 2014
New York, New York United States – Happy New Year! How the world celebrated the start of 2014 – NY Daily News
BBC News – New year celebrations welcome 2014
New Year’s 2014: Revelers Start Celebrations With Fireworks (PHOTOS)
Ma Ma says: ရန်ကုန်က၂၀၁၄ နှစ်သစ်ကူးပွဲ မှာ ပရိသတ်ထဲကို ကြဲချလာတဲ့ စက္ကူပန်းရောင်စုံကြယ်ကလေးတွေ ဆိုတဲ့ပုံကို ကြိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီစက္ကူပန်းရောင်စုံကြယ်ကလေးတွေက ပွဲပြီးသွားရင် အမှိုက်ပွကျန်ခဲ့မယ်ထင်တယ်။
ဒညင်းဝက် says: ကြည်နူးစရာ..
kyeemite says: Thank you for sharing.
Foreign Resident says: Happy New Year !!!
Kyaemon says: Ma Ma says: (Edit)
ရန်ကုန်က၂၀၁၄ နှစ်သစ်ကူးပွဲ မှာ ပရိသတ်ထဲကို ကြဲချလာတဲ့ စက္ကူပန်းရောင်စုံကြယ်ကလေးတွေ ဆိုတဲ့ပုံကို ကြိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီစက္ကူပန်းရောင်စုံကြယ်ကလေးတွေက ပွဲပြီးသွားရင် အမှိုက်ပွကျန်ခဲ့မယ်ထင်တယ်။…..
အလှအပ ပစ္စည်း (အရုပ်ကလေးလို)
အမှတ်တရ အဖြစ် ကောက်သွား တာရယ်၊
အများစုက အမှိုက် ဖြစ်မှာပါ၊
New York နယူးရောက်လို မြူနီစီပယ် ကလာသိမ်း မ လား၊
ပွဲစီစဉ်သူတွေကဘဲ တာဝန်ယူ မ လား၊ ဆိုတာကို
ရန်ကုန်ကရွာသားတွေက မန့်ပေး ပေးပါ၊
Kyaemon says: ဒညင်းဝက် says: (Edit)
Foreign Resident says: (Edit)
Happy New Year !!!………
And also, many happy returns to you!
padonmar says: အင်မတန်လှတဲ့ နှစ်သစ်ကူးပုံတွေ တ၀ကြီးကြည့်သွားပါတယ်။
ရန်ကုန်ကတော့ အမှိုက်ပစ်သူက အမှိုက်သိမ်းသူ(၀န်ထမ်း၊လုပ်အားပေး)ထက်အားသာနေပါတယ်။
ဘာဘဲပြောပြော မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ ကြေးမုံ။
ဦးကြောင်ကြီး says: တရုတ်သဗုံကြေးမုံဂျီး အပိုတွေ လုပ်မနေနဲ့.. ဒီနေ့ တရုတ်နှစ်ကူးနေ့.. ဘာကျွေးမှာလဲ ပေါဇမ်း..။ မြန်တျန့်ဆီကတော့ ကျောက်သံပတ္တမြား ကျွန်းသစ် ရေနံ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ မြေပေါ်မြေအောက် သက်ရှိသက်မဲ့ သယံဇာတတွေ သူခိုးဈေးနဲ့ ယူထားပြီး နှစ်ကူးမှာ မသိခြင်ထောင် ဆောင်နေလို့ရမလား..။ လာထား ဘဲကင် ဝက်ကင် ငါးကင် ပုဇွန်ထုပ်… မကုန် သူများပေးပစ်မယ်..။